မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): ခေါင်းလျှော်ဆိုင်သွား သတိထား …….
ခေါင်းလျှော်ဆိုင်သွား သတိထား …….
ခေတ်လည်းမှီတယ် လွယ်လည်းလွယ်တယ်ဆိုပြီး အများအားဖြင့် ဆံကေသာအတွက် ဆိုင်မှာလျှော်ခြင်း ၊ ဆံပင်နှင့်ပတ်သက်သည့်ပေါင်းတင်ခြင်း ၊ အရောင်ဆိုးခြင်း အပါအဝင် ဆံကေသာအလှတွက် လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ် ။ အားလုံးအတွက် အစဉ်ပြေပေမဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် သတိလေးတော့ ပေးချင်လို့ ပါ ။
လူတစ်ဦးတိုင်းတွင် ဓာတ်တည့်ခြင်း မတည့်ခြင်းဆိုသည့် ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေအများအပြားရှိပါတယ် ။ များသောအားဖြင့် အမျိုးသမီးများတွင် တစ်ယောက်က ဆံကေသာကိုဒါလေးလုပ်ထားတယ် လှတယ် အစဉ်ပြေပေမဲ့ နောက်တစ်ယောက်အတွက်ကျတော့ လူု့ အရေပြားမှာ တစ်ခြားတစ်ယောက်သုံးစွဲသော ခေါင်းလျှော်ရည် ၊ မိတ်ကပ် နှင့် အရောင်ဆိုခြင်းတွေတွင် ဓာတ်တည့်ချင်မှ တည့်ပါလိမ့်မယ် ။ အဲလိုမျိုးတွေရှိပါတယ် ။ ခေါင်းလျှော်နေသည့် ဦးခေါင်းအနီးတွင် ပန်ကာလေခံခြင်း ၊ အဲယာကွန်းလေ တည့်တည့်ကျရောက်နေရာမျိုးတွင် ခေါင်းလုံးဝ လျှော်ခြင်း မပြု့ လုပ်သင့်ပါ ။
လျှော်ပေးသူသည် တစ်ကိုယ်ရည်သန့် ရှင်းရန်လည်း လိုအပ်ပါတယ် ။ လူအများအပြားဥိးခေါင်းကို ကိုင်တယ်ရသဖြင့် အရေပြားကူးစက်ပိုးများသည့် လက်သည်းကြားအတွင်းမှနေ တစ်ခြားကို ဝင်ရောက်ကူးစေတက်လို့ ပါ ။ လက်သည်ရှည်ထားပြိး မသန့် ရှင်းခြင်း ၊ တစ်ဦးလျှော်ပြီးလျှင် လက်ကို ပိုးသတ်ဆေးရည်များဖြင့် မဆေးကြောခြင်းကြောင့် တစ်ခြားတစ်ဦးကို ရောဂါ ကူးစေတက်သည် ။
ခေါင်းလျှော်ပြီးလို့နှိပ်နယ်ပေးခြင်းသည် အလွန်သတိထားဖွယ် ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ဒါကို မသိနားမည်ဘဲ ခေါင်းနဲ့ ဂုတ်ပိုးများကို နှိပ်နယ်ခံယူတက်ကြပါတယ် ။ ခေါင်းလျှော်စင်ပေါ်တွင် အိပ်နေသည့်နေအထားဖြစ်နေပြီး ခေါင်းကိုမပြီး နှိပ်နယ်ပေးခြင်း နားနောက်နေရာတွင် နှိပ်နယ်ပေးခြင်း နားထင်များကို နှိပ်နယ်ပေးခြင်း အများဆုံးလုပ်ဆောင်ခြင်း ခံကြရပါတယ် ။ တစ်ချို့ က အဲလိုလုပ်မှ ကောင်းတယ် လူကိုပေါ့သွားတယ် အကြောတွေပြေတယ် ခေါင်းကြည်တယ်လို့ ပြောပါတယ် ။
နားထဲ့ကိုလည်း ရေဝင်အောင်လုပ်လည်း လုပ်ဆောင်နည်းတစ်မျိုးထပ်လုပ်ကြပါတယ် ။ ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးသတိထားရန် အရေးကြီးပါတယ် ။ အကြောဆိုင်ရာ အာရုံကြောဆိုင်ရာ ရောဂါမျိုးဖြစ်တက်ပါတယ် ။ အသက်အရွယ်ရလာသည့်အခါတွင် အဲလိုမျိုးတွေ များနေခဲ့ရင် ဦးခေါင်းပိုင်း တုန်တုန်ဖြစ်နေခြင်း ၊ အကြားအာရုံအလွန်နည်းလာခြင်း ၊ ခေါင်းကျင်ဝေဒနာစွဲကပ်လာနိုင်ခြင်းတို့ ဖြစ်လာတက်ပါတယ် ။ နားအတွင်းရေဝင်ခြင်းကြောင့် ကျန်ရှိနေခဲ့ပါက မှိုရောဂါကျရောက်တက်သလို နားအူခြင်း ၊ နားကိုက်ခြင်း နှင့် နားပြည်တည်ခြင်း တို့ ဖြစ်တက်ပါတယ် ။
ဆံကေသာအရောင်ဆိုခြင်းသင့်လုပ်ဆောင်ပါက လူတစ်ချို့ တွင် ဦးခေါင်းယားယံခြင်း ၊ ပူစပ်သလို ခံစားမိခြင်း ၊ ခေါင်းကိုက်ခေါင်းခဲသလို ခေါင်းမကြည်ခြင်းသုံးရက်ကျော်ကျော် ခံစားနေရလျှင်နီးစပ်ရာဆေးခန်းတစ်ခုကိုပြသပေးရန် လိုအပ်ပါသည် ။ ရက်ကြာလာပါက ဦးခေါင်းအရေပြားနီရဲပြီး ကုတ်ခြစ်ရာများကြောင့် ပိုးဝင်ပြီး မှိုတက်ရောဂါဖြစ်လာတက်ပါသည် ။ ဘောက်ဖတ်လိုလို အနာဖတ်များဖြစ်လာပြီး ဦးရေတစ်ခုလုံး အနာများပေါက်ပြိး ကုသမှု့ ကြာရှည်တက်ပါတယ် ။
Author MSSK at 3:59:00 PM
Labels: ကျန်းမာရေး ဆောင်းပါးများ, ခေါင်းလျှော်သူများ သတိထားရန်